Rita, Writing for My Sake!: ဒေါက်တာ သန်းထွန်း (၁၀)
Posted by Rita at 8/03/2010 05:17:00 PM
ီလမ်းစဉ်ပါတီ မဝင်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲလို့ ငါ့အထက်က ပါမောက္ခကျော်သက်က ပြောပြီး ငါ့အတွက် ပါတီဝင်လျှောက်လွှာကို သူ့ဘာသာဖြည့်ပြီး တင်လိုက်တယ်။
Same as me when I served in Navy.
အစီရင်ခံစာမှာ "ရဲဘော်သန်းထွန်း စည်းရုံး၍ မရပါ" လို့ ရေးတယ်။
For me remark by orally.
They can't force me.
But it is mandatory for all soldier.
ခုမှ စာကြွေးတွေ လာရှင်းနေတာ။
“ပဒေသရာဇ်ခေတ်က ဘယ်တော့မဆို ဗျာဒိတ်တော်မြတ်အတိုင်းပါဘုရားလို့ မပြောနိုင်ရင် ဒီကောင်မျိုး အတွင်းတော်ကို ဘယ်တော့မှ အခစားဝင်ရမယ့်အကောင် မဟုတ်ဘူး လို့ အပြောခံရတယ်။”
မရီတာ... အကြံဦးသွားတယ်...။ အဲဒီလိုမျိုး ကြိုက်မိတဲ့စာသားတွေ အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပေမယ့် အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အခုလို တင်ထားပေးတဲ့အတွက် ပြန်ဖတ်မိပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ =)